သင်၏လူအင်အားဖြည့်တင်းရေးမှစ၍ အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သည့်အလုပ် ပြီးဆုံးသည်အထိ သင့်အား ဆာရီနာရပ်ဆိုမှ ကူညီပေးပါမည်။
မည်သည့်အကြံဥာဏ်မဆို လိုအပ်လာလျှင် သို့မဟုတ် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလာလျှင် ကျွန်တော်/မတို့ဆီ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သည့် အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် (လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးစာချုပ်) တရားဝင်သဘောတူညီချက်ထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ စာချုပ်မှ အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မည်။
သင်၏အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများအား ကတိပြုမှုနှင့်အညီ သင်လုပ်ဆောင်ရမည်များမှာ….
အရှင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အလုပ်ကို ကျွမ်းကျင်သည့်အမူ အရာနှင့် လိမ္မာယဉ်ကျေးသည့်အမူအရာနှင့် တက်ရောက်လုပ် ဆောင်ရမည်
လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်များအား ဂရုစိုက်ရမည်
လုပ်ငန်းခွင်တွင် အခြားသောအလုပ်သင်လုပ်သားများနှင့်ဝန်ထမ်းများ ၏ အခွင့်အရေးများအား လေးစားလိုက်နာရမည်
အလုပ်ရှင်မှရရှိထားသော ယုံကြည်စိတ်ချမှု -သတင်းအချက်အလက် သည် လျှို့ဝှက်မှုဖြစ်သဖြင့်လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်မှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိလျှင် ၄င်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုရ။
အကယ်၍သင်သည် အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးလျှင် မိဘနှင့်အုပ်ထိမ်းသူဆီမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူပါ
လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးတာဝန်ဝတ္တရားများအား ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန် ကတိပြုမှု
လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးတာဝန်ဝတ္တရားများအား ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် သင်လုပ်ဆောင်ရမည်များမှာ….
လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးမှာ ပြဌာန်းထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိရန် ကျိုးကြောင့်ဆီလျှော်သည့်အားထုတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ပြီး မည်သည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့်လိုအပ်သည့်ချင့်ချိန်အကဲဖြတ်မှုများကိုမဆို ဆောင်ရွက်ပါ
လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအတန်းများ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို တက်ရောက်ပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအခွင့်အလမ်းများ၏အကျိုးအမြတ်များ ရယူပါ။
လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမှတ်တမ်းတစ်ခု ပြုစုထိန်းသိမ်းပါ။ ဥပမာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်
သင်၏အလုပ်သင်လုပ်သားသက်တမ်းအစမှ ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲများကို ပြေလည်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ။ သြစတြေးလျအစိုး ရမှ ငွေရေးကြေးရေးထောက်ပံ့မှုကို သြစတြေးလျအလုပ်သင်လုပ် သား ဘောက်ဆုများအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။.
သင်၏လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုစာချုပ်နှင့်အစီအစဉ်အရ သင့်အလုပ်ရှင် လုပ်ဆောင်ရမည်များမှာ……….
လိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမှာ ပူပေါင်းပါဝင်ရန် သင့်အား ခွင့်ပြုပေးရမည်
လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုပံ့ပေးမှုမှာ တက်ရောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု အချိန်အတွက် လုပ်အားခပေးချေရမည် (ကျေင်းအခြေပြုအလုပ်သင် လုပ်ခမပါဝင်ပေ)
အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်သည့်အလုပ်၏ လုပ်အားခများနှင့်ခံစားခွင့်များအကြောင်းစုံစမ်းရန်အတွက် တရားမျှတသောအလုပ်သတင်းအချက်အလက်စုံစမ်းရေးဌာန ဖုန်း ၁၃၁၃ ၄၉ သို့ဆက်သွယ်ရန် ဆာရီနာရပ်ဆိုမှ သင့်အားအကြံပြုပေး ပါမည်။
အလုပ်သင်လုပ်သားများ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူသူများအတွက် လုပ်အားခများ
သင်၏လုပ်အားခကို ယေဘူယျအားဖြင့် ကုန်သည် သို့မဟုတ် အရွယ်ရောက်သူလုပ်အားခ၏ ရာနှုန်းတစ်ခုအနေဖြင့် သင်အလုပ်လုပ်သည့်နှစ်အရေအတွက် အပေါ်မူတည်၍ သို့မဟုတ် အလုပ်သင်လုပ်သား သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူသူ၏ ရာထူးအရ တွက်ချက်ပေးပါသည်။ ရာထူး၊လုပ်အားခတိုးတက်မှုအဆင့်ကို ကျွမ်းကျင်မှုရရှိခြင်း၊ သတ်မှတ်ချိန်ကုန်ဆုံးခြင်း (ဥပမာ - ၁ နှစ်) သို့မဟုတ် နှစ်ရပ်လုံးပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အခြားအလုပ်ရှင်တစ်ဦးနှင့် သင်၏အလုပ်သင်အလုပ် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူမှုတစိတ်တပိုင်းအား သင်ပြီးစီးသွားပြီဆိုလျှင် (သို့မဟုတ် စပ်လျဉ်းသောအကြိုသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်ခန်းစာ ပြီးစီးသွားပြီဆိုလျှင်) အလုပ်သင်လုပ်သား သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူသူအဖြစ် သင့်ကိုအလုပ်ခန့်အပ်သောအချိန်မှာ ကျွမ်းကျင်မှုများအားအသိအမှတ်ပြုရန် သင့်ကိုရာထူးတိုးပေး နိုင်ပါသည်။ အချို့သောစက်မှုဇုန်များတွင် အရွယ်ရောက်အလုပ်သင်များနှင့် လေ့ကျင့်သင်ယူသူများအတွက် အနည်းဆုံးလုပ်အားခများပေးခြင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ အလုပ်သင်အလုပ်သား သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူသူ၏ အသက် အရွယ်ကို အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင်လည်း စက်မှုဇုံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခြားနားနိုင်ပါသည်။
စပ်လျဉ်းသောဆုတံဆိပ် သို့မဟုတ် သဘောတူညီမှုအရ သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိကျသောလုပ်အားခစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် သင့်မှာ အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
အလုပ်သင်လုပ်သားများနှင့် လေ့ကျင့်သင်ယူသူများသည် လုပ်အားခမဆုံးရှုံးဘဲ အလုပ်ပြီးဆုံးချိန်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု တက်ရောက်ရန်အလုပ်မှ ထွက်သွားခွင့်ပြုရမည်။ ကိစ္စအများအပြားတွင် အလုပ်ပြီးဆုံးချိန်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုသည် မည်သည့်နေရာ သို့မဟုတ် မည်သည့်အချိန်ပြီးဆုံးသည်ကို(အိမ်မှ အချို့ကိစ္စများအပါအ၀င်) ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ ၄င်းမှာအသုံးပြုခဲ့သောအချိန်များအတွက် လုပ်အားခရပိုင်ခွင့် သင့်မှာရှိသည်။
အလုပ်သင်လုပ်သားများနှင့် လေ့ကျင့်သင်ယူသူများအတွက် ခံစားခွင့်များကို စပ်လျဉ်းသောဆုတံတိပ် သို့မဟုတ် သဘောတူညီမှု အရထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ ခံစားခွင့်များတွင် အလုပ်လုပ်ချိန်နာရီများ၊အချိန်ပိုနာရီများ၊ ပြစ်ဒါဏ်နှုန်းထား၊ထောက်ပံ့ကြေးများ (ဥပမာ - ကိရိယာတန်ဆာ အားခွင့်ပြုမှု)၊ခွင့်ရက် နှင့် အလုပ်ပြီးဆုံးခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။
အချို့သောကိစ္စများတွင် ကျောင်းအခြေပြုအလုပ်သင်လုပ်သားများ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ယူသူများအား ခွင့်ရက်တောင်းဆိုရယူရန် ခွင့်မရှိပေ။ သို့သော် ၄င်းတို့၏လုပ်အားခအားအလျှော်ပေးရန် အပိုငွေ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားသောကိစ္စများတွင် ၄င်းတို့မှာခံစားခွင့် ခွင့်ရက်အနည်းငယ်၏ မျှတမှုကို တောင်းဆိုခွင့်ရှသည်။
သင်၏အလုပ်ရှင်မှ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကို ခေတ္တခဏ မထောက်ပံ့ပေးနိုင်လျှင် ပြည်နယ်လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအာဏာပိုင်မှ အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပံ့မှု ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍သင့်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့လျှင် အခြားအလုပ်ရှင်တစ်ဦးနှင့်ပြန်လည်နေရာ ချထားမှု စီစဉ်ပေးရမည်။ သင့်ကို အခြားအလုပ်ရှင်တစ်ယောက်ထံမှာ အများဆုံး ၆ လ ယာယီအလုပ်ခန့်အပ်မည် အလုပ်ခန့်အပ်မှုအဆုံးတွင် သင်သည်မူလအလုပ်ရှင်ထံ ပြန်သွားရ မည်
သင်၏လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုထောက်ပံ့ပေးသူနှင့်အတူ အချိန်ပြည့် အလုပ်ပြီးဆုံးချိန်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမှာ တက်ရောက်နိုင်မှုအား စီစဉ်ပေးရမည်
အလုပ်သင်လုပ်သား/လေ့ကျင့်သင်ယူသူများ၏ အရည်အချင်း တိုးတက်လာသည်အထိ သင်၏အလုပ်ရှင်မှ ၄င်းတို့၏ယာယီ ရာထူး၊အလုပ်မှနှုတ်ထွက်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ အထူးသဖြင့် သင့်အားအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ချိန်ထက် နည်းပါးသည့် အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းပါဝင်သည့် ပေးမထားသောခွင့်ရက် ဖြစ်သည်။ ရာထူး/အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သည့်ကာလအတွင်း မသက်ဆိုင်သောအလုပ်ကို သင်လုပ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ရာထူး/အလုပ်မှနှုတ်ထွက်မှု၏အများဆုံးအချိန်သည် ရက်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် သင်၏အလုပ်သင်လုပ်သား အားပယ်ဖျက်ခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
ဓနသဟာယအဖွဲ့တရားမျှတသောအလုပ်အက်ဥပဒေ ၂၀၀၉ အရ အလုပ်သင်လုပ်သားများ နှင့် လေ့ကျင့်သင်ယူသူများကို ၀န်ထမ်းအဖြစ် မျှမျှတတဆက်ဆံရမည်။ သင်သည် အသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လိုသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မဖြစ်လိုသည်ဖြစ်စေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး တရားဝင်ဖြစ်သောဆန္ဒပြသမှုမှာ ပါဝင်လိုသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မပါဝင်လိုသည်ဖြစ်စေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ် နိုင်ပါသည်။
မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ကိစ္စများနှင့်မဆို အကြံဥာဏ်များရယူလိုလျှင် သင်၏ ဆာရီနာရပ်ဆိုကိုယ်စားလှယ်သို့ချက်ချင်း ပြောဆိုပါ။